WALWAL CUSUB: Is Adkayntii Maamulka PSG Oo Guuldaro Ku Dhamaan Karta Iyaga Oo Hal Mar Wada Lumin Kara Neymar Jr, Kylian Mbappé Iyo Edinson Cavani. - Gool24.Net
WALWAL CUSUB: Is Adkayntii Maamulka PSG Oo Guuldaro Ku Dhamaan Karta Iyaga Oo Hal Mar Wada Lumin Kara Neymar Jr, Kylian Mbappé Iyo Edinson Cavani.
Maamulka kooxda PSG ayaa meel adag iska taagay bixitaanka Neymar Jr iyo Kylian Mbappé waxayna hadda ka walwalsan yihiin in ay arintii ugu xumayd ku dhacdo xili suuqyada soo socda kadib markii uu soo baxay walwal cusub oo saamayn ku yeelan karaa.
PSG waxay haysataa qaar ka mid ah gool dhaliyaasha aduunka ugu fiican waxayna kooxaha Yurub uga dhaarteen in ay u fasaxaan Neymar Jr iyo Kylian Mbappé oo si wayn loo doonayay.
Real Madrid iyo Barcelona ayaa si wayn u doonayay Kylian Mbappé iyo Neymar Jr laakiin maamulka PSG ayaa kooxaha reer Spain meel adag u joogsaday taas oo keentay in ay gacmo madhan ka soo laabteen Paris.
Laakiin hadda maamulka kooxda PSG ayaa wajahaya walwal cusub oo ay hal mar kuwada lumin karaan Neymar Jr, Kylian Mbappé iyo Edinson Cavani.
Ugu horayn, PSG ayaa hadda ka walwalsan in ay Neymar Jr ku lumiso lacag aad uga hoosaysa intii ay Barcelona ka diideen xagaagan maadaama oo uu jiro sharci FIFA leedahay oo xidiga reer Brazil u ogolaanaya in qiimihiisa ayna PSG go’aamin.
Dhinaca kale, Kylian Mbappé ayaa iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo PSG wuxuuna heshiiskiisa dhacayaa 2021 taas oo keenaysa in Real Madrid ay dalab xoogan gudbin doonto xagaaga soo socda sida ay haddaba sii qorshaysteen.
Waxay hadda PSG ka walwalsan tahay in FIFA ay qiimo hoose ku go’aamiso bixitaanka Neymar Jr isla markaana uu Kylian Mbappé u dhaqaaqo Real Madrid xagaaga soo socda maadaama oo uu gali doono sanadkii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa.
Intaas waxaa dheer in Edinson Cavani uu ku jiro sanadkii ugu danbeeyay ee heshiiskiisa PSG iyada oo agaasimaha ciyaaraha Leonardo aanu wax qandaraas cusub ah ilaa hadda u soo bandhigin xidiga reer Uruguay.
Arinta Neymar oo ah mid walwal ku abuuraysa maamulka PSG ayaa ah in qodobka 17 aad ee FIFA uu sheegayo in haddii uu ciyaartoy koox joogo muddo saddex sanadood ka yar isla markaana uu diyaar u yahay in uu ka baxo in markaas ay FIFA qiimihiisa suuqa go’aamin doonto.
Sidaa daraadeed, haddii ay FIFA qiimaha Neymar go’aamiso waxaa meesha ka baxaya is adkayntii maamulka PSG iyo wada xaajoodkii ay Barcelona iyo Real Madrid ku adkeeyeen taas oo xidiga reer Brazil u sahli karta in uu Camp Nou ku soo laabto.
Waxaana hadda soo baxaya walwal cusub oo ay maamulka PSG kuwada waayi karaan saddexda gool dhaliye ee Cavani oo xor ku bixi kara dhamaadka xili ciyaareedkan, Mbappe oo Real Madrid si wayn looga doonayo iyo Neymar oo qiimihiisa ay FIFA go’aamin karto.